Xildhibaan Jeesow: Haddii ay Wasiiradu imaan waayaan Kulanka Golaha Shacabka Mooshin ayaan ka keeneynaa – Kalfadhi
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow, oo ka tirsan Xildhibaannada Golaha Shacabka, ayaa wacad ku maray inuu hor boodayo Mooshin ka dhan ah Xukuumadda, haddii ay Xildhibaannada Wasiirada ahi imaan waayaan Kulanka 1-aad ee ugu soo horeeya Kalfadhiga 5-aad ee Golaha Shacabka, oo maanta baaqday. Sida ay xildhibaannada qaar sheegeen waxa ay dib-u-dhaca Kulankii Golaha ee maanta dusha u saareen Xildhibaannada Wasiirada ah oo, sida ay sheegeen, aan gabigoodba imaan kulanka maanta.
“Waxaan balan ku qaadeynaa haddii fadhigaan fadhiga ku xiga, Golaha Wasiirada ay imaan waayaan fadhiga, oo waliba ay lambar wanka imaan waayaan, Wallaahi baan ku dhaartee, anaa hor-kacaaya, Mooshin aana ka keeneynaa, geddigoodna waan rideynaa, Reysal Wasaarahana ha ogaado” ayuu yiri Xildhibaan Jeesow. Hadalkiisa waxaa la qaba Xildhibaanno kale, oo maanta la wadaagayey warbaahinta hadalo ay ku darayeen xukuumadda.
Laakiin, ilo xog ogaal ah ayaa Kalfadhi u xaqiijiyey in ugu yaraan afar wasiir ay joogeen Kulankii Golaha Shacabka ee maanta baaqday: Wasiirka Ganacsiga, Xildhibaan Cabdi Xayir Maareeye, Wasiir Kuxigeenka Waxbarashada, Xildhibaan Jamaal Xasan Ismaaciil, Wasiir Kuxigeenka Wasaaradda Gargaarka, Xildhibaan Daahir Cabdi Cabdullaahi (Dr. Go), iyo Wasiiru Dowlaha Waxbarashada, Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle (Jaabir).
Hase ahaatee, Wasiirada Xukuumadda Kheyre ku jira ee haddana Xildhibaannada ah, oo tiro ahaan lagu qiyaaso ugu yaraan 40 Xildhibaan, waxaa maanta ka joogay golaha afartaas wasiir oo kaliya inta ay ishu qabatay, lamana oga sababta ay xildhibaannada qaar u saarayaan diiradda wasiirada ah xildhibaannada iyo ka maqnaanshiyahooda kulankii golaha ee maanta, iyada oo ay jiri karaan xildhibaanno kale oo aan wasiiro ahayn, kana maqnaa kulankii golaha ee maanta.
Xildhibaanno soojeediyey in Kulanka 1-aad ee Golaha Shacabka looga hadlo amaanka dalka